ESI EWEPỤ OBERE AKPA QIWI RUO MGBE EBIGHỊ EBI - QIWI - 2019
Wepu obere akpa n'ime usoro ịkwụ ụgwọ QIWI
Enweghị njikọ Njikọ Wi-Fi bụ nsogbu na-adịghị mma. Ma ọ bụrụ na enweghi ike ijikọ na Ịntanetị site na njikọ njikọta, ana-ebipụ onye ọrụ ahụ n'èzí. Ya mere, nsogbu a ga-adarịrị ngwa ngwa. Tụlee ihe kpatara ya na nkowa.
Nsogbu na nkwụnye laptọọpụ
Ọtụtụ mgbe, ihe kpatara ịghara ijikọ na netwọk dị na ntọala ederede na-ezighi ezi. Enwere ezigbo ntọala na-emetụta netwọk, n'ihi ya enwere ọtụtụ ihe mere ọ ga - eji ghara ịrụ ọrụ.
Ebumnuche 1: Nsogbu na onye ọkwọ ụgbọala Wi-Fi
Ọnụnọ nke njikọ guzosiri ike na Wi-Fi na-egosi akara ngosi kwekọrọ na tray. Mgbe netwọk dị mma, ọ na-adịkarị ka nke a:
Ọ bụrụ na enweghị njikọ, akara ngosi ọzọ na-egosi:
Ihe mbụ ị ga - eme n'ọnọdụ a bụ ịlele ma ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọala maka eriri netwọk wireless. Iji mee nke a:
Mepee njikwa ngwaọrụ. Usoro a dị ka otu n'ime nsụgharị Windows niile.
More: Otu esi emeghe "Njikwa Ngwaọrụ" na Windows 7
Chọta ngalaba na ya "Ndị nkwụnye netwọk" ma hụ na onye ọkwọ ụgbọala ahụ arụnyere na enweghị njehie ọ bụla. Ụdị laptọọpụ dị iche iche nwere ike ịnwe nkwụnye Wi-Fi site na ndị nrụpụta dị iche iche, ya mere, a pụrụ ịkpọ ngwaọrụ dị iche iche. Ị nwere ike ijide n'aka na anyị na-eji ihe ntanetị ikuku na-eme ihe site na ọnụnọ okwu ahụ "Ikuku" na aha.
Ọ bụrụ na ndepụta nke ngwaọrụ ihe nkwụnye dị anyị mkpa na-efu ma ọ bụ jikọtara ya na njehie, nke nwere ike igosi site na akara dịka akara akara na aha nke ngwaọrụ ahụ, ọ ga-arụrịrị ma ọ bụ weghachite. A na-atụ aro ka ị jiri ngwanro ahụ si n'aka onye na-emepụta ihe nlereanya nke laptọọpụ a, nke a ga-enwetara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ma ọ bụ nke e nyere na kọmputa ahụ.
Hụkwa: Nbudata ma wụnye ọkwọ ụgbọ ala maka Wi-Fi nkwụnye /
Ebumnuche nke 2: Eji kpochapụrụ ya
Njikọ na netwọk ahụ nwere ike ịnọghị ọbụna mgbe enwere ike ịkwụsị ihe nkwụnye ahụ. Tụlee nsogbu nke nsogbu a na Windows 10.
Ị nwere ike ikpebi na ngwaọrụ ahụ nwere nkwarụ site n'aka otu njikwa ngwaọrụ. Enwetara ngwaọrụ dị n'ime ya site na akụ na-egosi na akara ngosi ahụ.
Iji mee ka onye nkwụnye ahụ nwee ike, jiri naanị ogwe aka nchịkọta akara iji wepụta ihe ndị dị na mpaghara wee họrọ ihe ahụ "Gbanyụọ ngwaọrụ".
Na mgbakwunye na njikwa ngwaọrụ, na-akwado ma ọ bụ na-egbochi ntanetị ikuku netwọk nwekwara ike ime site na Windows Network na Sharing Center. Iji mee nke a, ị ghaghị:
Pịa akara ngosi njikọ netwọk wee pịa njikọ kwesịrị ekwesị.
Na windo ohuru gaa mpaghara "Ịhazi Ntọala Ntọala".
Mgbe ịhọrọ njikọ dị mkpa, rụọ ọrụ ya site n'enyemaka nke RMB.
Hụkwa: Otu esi enyere Wi-Fi aka na Windows 7
Ebumnuche nke 3: Arụ ọrụ ụgbọ elu
Ịkwụsị netwọk ikuku nwere ike ime n'ihi n'eziokwu na arụ ọrụ laptọọpụ ahụ "Na ụgbọelu". N'okwu a, akara njikọ netwọk na tray ahụ gbanwere oyiyi nke ụgbọelu ahụ.
Iji gbanyụọ ọnọdụ a, ịkwesịrị igodo akara ngosi ụgbọelu wee pịa akara ngosi kwekọrọ na ya ka ọ ghara ịrụ ọrụ.
N'ọtụtụ akwụkwọ ederede iji mee / gbanyụọ usoro "Na ụgbọelu" E nwere isi ihe pụrụ iche, nke akara ngosi ahụ na-egosipụta. A na-ejikọta ya na isi. F2.
Ya mere, iji kwụsị ọrụ ahụ, ị ​​ga-eji igodo ụzọ mkpirisi Fn + f2.
Nsogbu na ntọala nke rawụta
Ntọala ala nke onye ntinye redio nwekwara ike ịbụ ihe mere na laptọọpụ adịghị ejikọta Wi-Fi. Nke mbụ, ị kwesịrị iche echiche banyere nke a ma ọ bụrụ na kọmputa adịghị ahụ netwọk ma ọlị na ọkwọ ụgbọala nkwụnye ọkụ arụnyere. N'ihi n'eziokwu na e nwere ụdị dị iche iche nke ndị na-eme njem site na ndị na-emepụta ihe dị iche iche site na iji ngwa ngwa dị iche iche, ọ na-esiri m ike inye ntụziaka site na nkwụsịtụ na otu esi edozi nsogbu na ha. Mana ọ ka nwere isi ihe ole na ole nwere ike ịkwado ọrụ a:
Ndị njem niile nke oge a nwere interface weebụ ebe ị nwere ike hazie ntọala ha;
Na ndabara, adreesị IP nke ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a ka 192.168.1.1. Iji banye na ntanetị weebụ nke onye ntanetị, banye nnọọ adreesị a na eriri osisi;
Iji abanye na ntanetị weebụ, ndị na-emepụta site na ndabara na-etinye nbanye. "Nchịkwa" na paswọọdụ "Nchịkwa".
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikọ na peeji nke redirect site na ndị a, kọwaa na teknụzụ nke ngwaọrụ gị.
The ọdịnaya nke rawụta interface nwere ike anya kpam kpam dị iche iche. Ya mere, iji gbanwee ntọala ya, ọ dị mkpa ka ị kwenyesie ike na ị ghọtara ihe ị na-eme. Ọ bụrụ enweghị obi ike dị otú ahụ, ọ ka mma ịkpọtụrụ ọkachamara.
Ya mere, olee ihe nwere ike ịbụ nsogbu na ntọala nke router, n'ihi na laptọọpụ enweghị ike ijikọ na Wi-Fi?
Ebumnuche 1: Njikọ ikuku na-adịghị ekwe
Nsogbu dị otú a nwere ike ime na onye ntanetị ụlọ, ebe ejiri njikọ netwọk jikọọ njikọ na onye na-eweta ya na otu oge ahụ enwere ohere ịmepụta ebe ị na-enweta ikuku na-esi na nke ị nwere ike jikọọ laptọọpụ, mbadamba ma ọ bụ smartphone na Ịntanetị. Tụlee otú e si ahazi ya na ihe atụ nke rawụta HUAWEI HG532e.
Iji chọpụta ma agbanyere Wi-Fi mode na router, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Jikọọ na netwọk weebụ nke onye rawụta site na netwọk wired.
Chọta mpaghara nke ngalaba maka ịhazi netwọk ikuku. A na-akpọkarị ya dị ka WLAN.
Lelee ma enwere njirimara ịntanetị njikọ na ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwere nkwarụ, nye ya aka site na ịchọta igbe.
N'ọtụtụ ụdị ihe ntanetịime, enwere ike ịnye ọrụ / nkwarụ netwọk site na ịpị bọtịnụ pụrụ iche na ikpe ahụ. Ma, na-agbanwe ọnọdụ site na netwọk weebụ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya.
Ebumnuche nke 2: Ntọcha Njikọ Kwadoro
Njirimara a dị na ndị na-eme njem ka ha wee nwee ike ijikwa nchekwa nke ndị ọrụ site na njikọ na-enweghị ikike na netwọk ụlọ ha. Na onye ntanetị HUAWEI, nhazi ya dịkwa na mpaghara WLAN, mana na taabụ dị iche.
Ihe atụ a na-egosi na a na-enyere ọnọdụ nzagharị aka ma nweta ohere netwọk n'otu ngwaọrụ nke adreesị MAC dị na Whitelist. Ya mere, iji dozie nsogbu njikọ ahụ, ị ​​ghaghị ma ọ bụ gbanyụọ usoro nzacha site na ịchọta igbe "Kwado"ma ọ bụ gbakwunye adreesị MAC nke eriri netwọk ikuku nke laptọọpụ gị na ndepụta nke ngwaọrụ echere.
Ebumnuche nke 3: DHCP nkesa nwere nkwarụ.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme njem na-ejighị na Ịntanetị nweta, kama ha na-ekenye adreesị IP na kọmputa na kọmputa ndị dị na netwọk ya. Usoro a na-eme na akpaghị aka na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eche echiche banyere otu ngwaọrụ dị iche iche dị na netwọk ahụ onye ọ bụla ọzọ. Ihe nkesa DHCP bụ maka ọrụ a. Ọ bụrụ na ọ na-apụta na nkwarụ, ọ gaghị ekwe omume ijikọ na netwọk, ọbụna ịmara paswọọdụ. A na-edozi nsogbu a n'ụzọ abụọ.
Nye otu adreesị adreesị na kọmputa gị, dịka ọmụmaatụ 192.168.1.5. Ọ bụrụ na adreesị IP nke onye na-ahụzi ihe gbanwere na mbụ, mgbe ahụ, dịka ya mere, a ga-ezigara kọmputa ahụ adreesị nke dị n'otu ebe adreesị na router. N'ezie, nke a ga-edozi nsogbu ahụ, ebe ọ bụ na ejikọta njikọ ahụ. Ma n'ọnọdụ a, arụ ọrụ a ga-emeghachiri maka ngwaọrụ niile jikọtara na netwọk gị. Ka ị ghara ime nke a, gaa na nke abụọ.
Jikọọ na rawụta ma nye DHCP aka. Ntọala ya dị na ngalaba nke maka netwọk mpaghara. A na-akpọkarị ya LAN ma ọ bụ nbibi a dị na ngalaba aha. Na Onye na-ahụ maka HUAWEI, iji mee ya, naanị ị ga-achọ ịlele igbe nlele ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwaọrụ niile ga - ejikọta na netwọk ahụ n'enweghị ntọala ndị ọzọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ihe kpatara nke a nwere ike ghara inwe njikọ na Wi-Fi, nwere ike ịdị nnọọ iche. Mana nke a apụtaghị na ị ga-ada mbà n'obi. Site na ihe ọmụma dị mkpa, a ga-edozi nsogbu ndị a n'ụzọ dị mfe.
Idozi nsogbu ahụ site na mgbochi WI-FI na laptọọpụ
Idozi nsogbu na ebe WI-FI na laptọọpụ